मोटरसाइकलको पछाडि बसेका थिए तर घर पुग्न पाएनन्, बाटै यसरी भयो मृत्यु – Sandesh Press
June 26, 2021 269
मानिसलाई लिन काल कुन रुप लिएर आउँछ थाहा नहुने रहेछ । यस्तै घटना पर्वतमा भएको छ । त्यहाँ मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–७ खरेहामा मोटरसाइकलबाट खसेर एकजना युवकको मृत्यु भएको छ ।
मृत्यु हुनेमा मोदी गाउँपालिका–५ बाजुङका १७ वर्षीय अर्जुन कुँवर रहेका छन् । उनी मोटरसाइकलको पछाडि बसेका थिए । कहीँ गैरहेका उनी चढेको मोटरसाइकलका चालकले पत्तो पाएनन् । नजिकै रहेको डिभाइडर नै अर्जुनलाई काल बनेर कुरीरहेको थियो ।
उनी मोदीबाट कुश्मातर्फ जाँदै थिए । उनी चढेको ग २० प २३०५ नंको मोटरसाइकल खरेहामा आइपुग्दा डिभाइडरमा लागेको थियो ।
उक्त मोटरसाइकल बिहीबार ठो क्किँ दा पछिल्लो सिटबाट खसेका कुँवर गम्भीर घाइते भएका थिए । उपचारका क्रममा शुक्रबार बिहान गण्डकी अस्पताल पोखरामा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए ।
Prevयी राशि भएका पुरुषले पाउँछन् सुन्दर श्रीमती, हुन्छन् असाध्यै गुणवान !
Nextबिवाह गरेर घर पुग्न नपाई बेहुलीका दाजुले उठाए यस्तो कदम? बेहुलाको तत्काल मृत्यु, बेहुली अस्पतालमा